Budebuduze Gelendzhik ku Krasnodar esifundeni, kukhona enhle, eluhlaza, isigodi kahle kugcinwe Divnomorskoye. Ngaphambili, wabizwa ngokuthi: Gelendzhik Amanga. Kodwa izivakashi ubuhle bendawo kolwandle kuyinto engakhanyi ukuze kuqhathaniswa ngayo "divom". kwavela Ngakho igama Divnomorskoe. Lapha ungakwazi ukujabulela iphunga Pines Pitsunda, cwilisa in kolwandle amahle ulale ogwini ahlanzekile. Yiqiniso, ngeke akwenze ngaphandle ukuzijabulisa. I okuvelayo acacile kakhulu ukuhlala ngemva kokuvakashela amapaki yamanzi endawo.
Ukuthola eholidini imizwelo kakhulu bathande kokubili abadala kanye nezingane. Lapho baye edolobhaneni Divnomorskoye? Waterpark "Poseidon" kungatholakala inhliziyo kwaleli chibi wendawo. Yena kude ayimkhangi, ukuze indlela ukuthola kube lula. Udinga ukwazi kusengaphambili ukuthi "Poseidon" kuyinto ekahle izingane. Siqukethe ezimbili amaslayidi, lemiklamo, ophansi kakhulu - izingane, i-steeper yesibili - intsha kanye nabantu abadala. Nakuba igama lalo epaki amanzi kuyinto esabekayo, kodwa ngoba kumnandi nezingane 5-10 ubudala.
Izivakashi edonsela ekahle Divnomorskoe yashayisa unqenqema zokuhlala. Waterpark itholakala khona eduze kwayo. "Poseidon" zingahlukaniswa zibe linezingxenye ezimbili. Ngo UMnyango owodwa kuholela Uzalo nge amaslayidi imitha-9 enye - nge imitha-7. Okuningi kude ungezwa yokuhlekwa squeals izingane ashaya khona. Ukuba fun in the "Poseidon", ungakwazi ukujabulela umoya ngibone indalo, eqinisweni a amamitha ambalwa kude amanga oLwandle Olumnyama.
Lokhu epaki amanzi Ubuye okubhukuda ezimbili, eyodwa ezijulile futhi enkulu ngaphezulu, elinye - ezincane kanye esincane. Nakuba izingane frolic entabeni encane ngesimo inyoka, abazali bangakhulisa laze ku ilanga loungers. Amazing resort Divnomorskoe! Waterpark "Poseidon" futhi kusimangaze izivakashi ngemfudumalo yayo. abafundisi abangomakad 'ebona uyohlale anikeze iseluleko uma udinga usizo. Yebo, ngaso sonke isikhathi kwi abatakuli isexwayiso.
Divnomorskoe, amanzi ipaki "Golden Bay"
Etholakala eduze Divnomorskoe eyodwa resort ngaphezulu - Kabardinka. Ngakho-ke lokho 10 amakhilomitha away kuyinto emangalisayo epaki amanzi "Golden Bay". Abantu beze lapha ukubungaza amaholide bevela nxazonke Gelendzhik, kuhlanganise Divnomorskoe. Lesi sakhiwo iyona enkulu kunazo zonke e sihlanganisa lonke izwe laseRussia kanye kungokwalabo esingcono kakhulu eYurophu. "Golden Bay" ihlanganisa indawo 15 amahektha.
Kuzo zonke izinhlangothi aquacomplex sizungezwe siluhlaza nezihlahla. Izivakashi ziyakwazi ukubona Ukuncoma ubuhle yezindawo amachibi yokufakelwa, okuyinto zitholakala emhlabeni amaslayidi oyinyoka. Izivakashi ungahamba ngepaki amanzi usuku lonke, ngoba lapha ungakwazi adle amathilomu ethokomele.
Izici isitayela ukuzijabulisa ku "Golden Bay"
Ukwakhiwa kwehlelo eziyinkimbinkimbi aqua kungokwasekuqaleni kakhulu, kukhona izitayela eziningi kangaka okuxubile. Ngakho lapha wonke umuntu angakwazi ukuthola ekhoneni ukunambitha, futhi uzulazule endaweni enkulu kalula kakhulu.
Ngisho isivakashi ezingezwakali kakhulu uzothola lapha ukuzijabulisa angayithandi. inombolo Izivakashi Yisimanga olukhulu ezikhangayo yesimanje, iningi lawo ahlukile. Thrill angaya phansi plait kathathu, "Multimoulds", "ku-internet Kamikaze". Diving ulinde isikhungo diving.
Umangale "Golden Bay" nemindeni nezingane, kuhlanganise amaslayidi ekhethekile 50 zakhiwa. Konke okwenzekayo epaki amanzi ukubukela okuqapha, ngakho izingane nje musa ulahleke futhi kuyoba okuphephile. Kufanele kuphawulwe ukuthi eduze Gelendzhik ukusebenza amapaki ezimbili amanzi - "Bhehemoti" futhi "Dolphin".
beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abaningi bathi "Poseidon" - epaki amanzi silula, kodwa ke kufanelekile izingane. Zafika lapho, zatholana nakupalis, knurled futhi ongayikukhubeka amaslayidi osekhulile.
Akekho uhlala qakala ubukhulu kanye yesimanjemanje "Golden Bay". Kunezinto ukwenza, ngisho kakhulu. Abaningi aveze ukuthi kule eziyinkimbinkimbi zashaya letingabhukusha echibini.
Airbus A319. Icebo endlwaneni eyakhiwe futhi izindawo ezingcono
Petersburg: lapho ukuya ngempelasonto? Kuphi nengane Petersburg?
IzAga mayelana inganekwane: okulinganisela lokho abakwaziyo ukufundisa? Izaga edume kakhulu futhi amazwi
Karelian Bobtail: ukugcinwa kanye ukunakekelwa
Amathiphu indlela yokusebenzisa amakhambi abantu ngoba induna
Indlela yokwenza indiza ephuma ibhodlela plastic ngezandla zakhe
Ngazi kanjani isikweletu of yerenti ngo-akhawunti yomuntu: umugqa ashisayo Izinsiza